EU gbara ume ka ọ kwụsị mmebi nke ikike ndị ọrụ Alitalia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » EU gbara ume ka ọ kwụsị mmebi nke ikike ndị ọrụ Alitalia
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
ETF na -akatọ eziokwu na European Commission enweghị ike ịtụle ikike ikike ndị ọrụ n'okpuru European Pillar of Social Rights.
ITA nyere ọkụ na -acha akwụkwọ ndụ iji weghara akụkụ nke ọrụ Alitalia.
Mkpebi a bụ nnukwu mmebi nke nkwekọrịta mkpokọta mkpokọta dị ugbu a, otu kwuru.
Mkpebi nke Commission na -emetụta ndụ ihe karịrị mmadụ 11,000.
Ndị ọrụ ụgbọ njem Europe na -akatọ nkwubi okwu nke European Commission kwupụtara taa gbasara ikpe Alitalia/Italia Trasporto Aereo SpA (ITA) nke na -enye ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ, ITA ọkụ ọkụ iji weghara akụkụ nke ọrụ Alitalia.
O juru anyị anya na European Commission nwere ike ịdị nfe na enweghị nlebara anya maka ikike ndị ọrụ were mkpebi a. N'echiche anyị, nke a bụ nnukwu nsogbu na nnukwu mmebi nke nkwekọrịta nkwekọrịta mkpokọta mkpokọta iwu dị na Italytali, na -agbasi mbọ ike nke ndị otu Italiantali na ndị na -ewe mmadụ n'ọrụ n'ịkwado nkwekọrịta nkwekọrịta ọrụ ọhụrụ. Kama, ọnọdụ EC ugbu a na -akwalite nkwekọrịta ọrụ ọhụrụ na nke nwere ike ịdị njọ. A na-akwalite kọmishọna a maka ịdị ọnụ ahịa yana ọ na-eme ya na-efu ụgbọ elu na-adigide, ọkachasị ụgbọ elu na-adigide ọha.
Livia Spera, odeakwụkwọ ukwu nke ETF na -ekwupụta:
Nke a bụ ihe ịma aka n'ihu ndị ọrụ Alitalia, ezinụlọ ha na ndị otu ha. Mkpebi nke kọmitii a metụtara ndụ ihe karịrị mmadụ 11,000 na ezinụlọ ha na iji ụdị okwu a bụ ihe na -akpasu iwe na iwepụ nchegbu ha. N'ịdị n'otu anyị na ndị ọrụ ibe anyị ndị na -eme ngosi taa megide ụzọ adịghị mma a na -ejighị n'aka, ana m akpọku European Commission ka ọ weghachite nkwupụta ya wee tụgharịa uche ebumnuche nkwado steeti a, nke na -anaghị akwado ụlọ ọrụ ụgbọ elu na -adigide, na anaghị akwado. ụmụ amaala Europe.
Tụkwasị na nke ahụ, ETF na -akatọ eziokwu ahụ na European Commission enweghị ike ịtụle ikike ikike ndị ọrụ n'okpuru Pillar of Social Rights, gụnyere mana ejedebeghị na ụkpụrụ nke ọrụ echekwara na mgbanwe na mkparịta ụka mmekọrịta. Ọzọkwa, ETF na -adọrọ uche gaa na eziokwu ahụ bụ na EC na -eleghara mbọ ọ bụla anya iji chebe nkwekọrịta ọrụ nke ndị ọrụ ka onye ọrụ ọhụrụ, ITA goro.
ETF na -akwado ndị ọrụ Alitalia Italiantali na -egbu ihe taa, na mbọ ha ịmaliteghachi mkparịta ụka ha na onye ọrụ ọhụrụ, ITA. A ga -emerịrị nke a na nkwanye ugwu zuru oke maka iwu Italiantali, yana ịnakwere ikike nke ịjikọ ọnụ na ọkwa mba.